Event Token စျေး - အွန်လိုင်း EVENT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Event Token (EVENT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Event Token (EVENT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Event Token ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Event Token တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Event Token များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Event TokenEVENT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00276Event TokenEVENT သို့ ယူရိုEUR€0.00234Event TokenEVENT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00211Event TokenEVENT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00252Event TokenEVENT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.025Event TokenEVENT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0174Event TokenEVENT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0616Event TokenEVENT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0103Event TokenEVENT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00369Event TokenEVENT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00386Event TokenEVENT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0617Event TokenEVENT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0214Event TokenEVENT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0149Event TokenEVENT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.207Event TokenEVENT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.463Event TokenEVENT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00379Event TokenEVENT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00418Event TokenEVENT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0861Event TokenEVENT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0192Event TokenEVENT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.292Event TokenEVENT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.28Event TokenEVENT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.05Event TokenEVENT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.203Event TokenEVENT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0763
Event TokenEVENT သို့ BitcoinBTC0.0000002 Event TokenEVENT သို့ EthereumETH0.000007 Event TokenEVENT သို့ LitecoinLTC0.00005 Event TokenEVENT သို့ DigitalCashDASH0.00003 Event TokenEVENT သို့ MoneroXMR0.00003 Event TokenEVENT သို့ NxtNXT0.199 Event TokenEVENT သို့ Ethereum ClassicETC0.000405 Event TokenEVENT သို့ DogecoinDOGE0.828 Event TokenEVENT သို့ ZCashZEC0.00003 Event TokenEVENT သို့ BitsharesBTS0.109 Event TokenEVENT သို့ DigiByteDGB0.103 Event TokenEVENT သို့ RippleXRP0.00961 Event TokenEVENT သို့ BitcoinDarkBTCD0.0001 Event TokenEVENT သို့ PeerCoinPPC0.00959 Event TokenEVENT သို့ CraigsCoinCRAIG1.26 Event TokenEVENT သို့ BitstakeXBS0.118 Event TokenEVENT သို့ PayCoinXPY0.0484 Event TokenEVENT သို့ ProsperCoinPRC0.348 Event TokenEVENT သို့ YbCoinYBC0.000001 Event TokenEVENT သို့ DarkKushDANK0.889 Event TokenEVENT သို့ GiveCoinGIVE6 Event TokenEVENT သို့ KoboCoinKOBO0.655 Event TokenEVENT သို့ DarkTokenDT0.00254 Event TokenEVENT သို့ CETUS CoinCETI8
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 18:20:02 +0000.